जलविद्युतलाई बढावा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएन् : गुरागाईँ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
जलविद्युतलाई बढावा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएन् : गुरागाईँ
Posted by Milap Subedi | १० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०८:२२ |
सरकारले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भर्खरै निति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी लिने भनेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा एवं जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । लगानी लिने मात्रै होईन दिने पनि भनेको छ । दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको ११० बाट १५ सय किलोबाट घण्टा पुर्‍याउने भनेको छ ।
पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले आफैले ल्याएको ९९ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यति मात्रै होइन केन्द्रीय प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउने जलविद्युत आयोजनाको हकमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान नदिएपछि उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु परेको छ ।
सरकारले गैरजिम्मेवार गतिविधि गरेको भन्दै जलविद्युत उत्पादकले अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै अदालतमा उजुरी दिएपछि यस्तो आदेश दिएको हो । नीति नबनेका होइनन् । प्रतिवद्धता कति आए कति । ९९ बुँदे कार्यान्वयनलाई सजिलो पार्न भन्दै बहालवाला ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले श्वेत पत्र समेत ल्याउन भ्याए ।
हामीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँलाई प्रतिवद्धता भुल्दै जाने सरकारले पाँच वर्षभित्रमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ला भनि विश्वास गर्ने आधार छ ? भनि सोधेका छौँ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा अथवा जलविद्युतको कुरा पर्याप्त आएको छ ?
–निरन्तरताका रुपमा केही कुरा आएका छन् । विगतमा पनि ति कार्यक्रमहरु नराम्रा थिएनन् । तर, नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा र बजेटमा समेटिएका कुरा जलविद्युतका क्षेत्रमा पछि आएर कार्यान्वयन नभएका घटना हामीले देखेका, भोगका छौँ । नीति तथा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेतर्फ चैँ कसरी सरकारमा रहेका दल तथा व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्दछ । सरकारका मन्त्रीहरुले भन्ने गर्नु भएको छ,–क्रान्तिकारी परिवर्तन, छलाङ मार्ने परिवर्तन । त्यो परिवर्तन आउने खालका बुँदा यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका देखिदैनन् ।
अनि पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार छ । कि यो महत्वकांक्षा मात्रै हो ?
–पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी निजी क्षेत्रले आयोजना अध्ययन गरेर, पीपीए गरेर फाइनान्सियल क्रोजर गरेर अघि बढेका आयोजनाहरु पनि छन् । तर हामी गएकै वर्ष के भोग्यौँ भन्दा बैंकहरुले समयमा भुक्तानी नगर्दा त्यो असर यही वर्ष आउने आयोजनामा प¥यो । ति आयोजना अर्को वर्ष धकेलिए ।
पीपीए भएका, ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु तीन वर्षमा आउनु पर्ने थियो । त्यो तीन वर्षभित्रमा नआउने सम्भावना बढेर गयो । पीपीएका लागि करिब साढे ६ हजार मेगावाटका आयोजना लाइन लागेर बसेका छन् । त्यसमा थप पीपीए गर्ने कुराहरु अहिले रोकिएको थियो ।
अस्तिको ऊर्जामन्त्रालयको श्वेतपत्रले १५ हजार बनाउने भन्यो । तर, पीपीए भइरहेको छैन । अब हुने आशा गरेका छौँ । राज्यले यो भन्दा पहिले पनि धेरै प्रतिवद्धता गरेका कारणले केही आयोजनाहरु अघि बढे । तर, यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सकस परिरहेको छ ।
किन भने राज्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लिइएको नीतिगत सहजताहरुपनि कार्यान्वयन गरेन । टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा सचिव सुमन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर एउटा ९९ बुँदे कार्यविधि बनायो । जसले कति समयमा के गर्ने ?कहिले गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट कसरी पु¥याउने भन्ने कुराको फेहरिस्त क्लियर गरिएको थियो ।
त्यसमा निर्माणाधिन आयोजनालाई सहुलित दिने भनिएको थियो । प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदानको रुपमा दिने, वन सम्बन्धि प्रक्रिया छोट्याउने लगायत कुराहरु त्यसमा उल्लेख गरिएका थिए । त्यस्ता कुराहरुमा एकल डेक्स बनाएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाउने, ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीस्तरीय समन्वय समिति बनाउने, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जग्गाप्राप्ति सम्बन्धि काम गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा पहिलेनै उल्लेख थियो ।
कार्यान्वयन गर्नु पर्ने थियो । अहिलेको कार्यक्रममा त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भनिएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकि नै छ । सरकारले लिएको सम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार विकास अथवा जलविद्युत महत्वपूर्ण भएपनि त्यसलाई बढावा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भान भएको छैन । यो निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रम हो । परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो ।
उसो भए यसले छलाङ मार्दैन ?
–नीति तथा कार्यक्रमले भाषण गर्ने कुरामा निरन्तरता पायो । अहिले पनि गएको वर्ष गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जुन उदासिनता देखार्ईएको छ , यो सरकारले केही समय विताईसकेको पनि छ । त्यसैले क्रमभङ्गता गरेर, छलाङ् मार्नेगरी अर्को कुनै नयाँ काम गर्नेमा त्यति आशावादी देखिएन ।
पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन ?
–अघि मैले जुन फेहरिस्त गरे, जे गर्छु भनिएको थियो त्यो गरिएन । भनेका कुरा भटाभट पुरा गरेको भए पाँच वर्ष नभए ६ वर्षमा हुन सक्थ्यो होला । तर, राज्य पक्षबाट छिटो गर्नका लागि कँही पनि सहुलीयत र सहयोग भएन ।
०कार्यान्वयनका लक्षण कहिले देखिएलान् त ? बजेट पछि ?
–दुईटा कुरा । एक त तत्काल आजैका मितिदेखि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठाउँ छ । राज्यले अनुदान दिने कुरा र वन सम्बन्धि समय छोट्याउने कुरा, जग्गा प्राप्तिको कुरा । यसका लागि बजेट कुर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । आज, भोलि नै कार्यान्वयनका लक्षण देखाउन सकिन्छ । जस्तो सरकारले सिण्डकेट हटाउने लगायत काम जुन गरेको छ । यसलाई कुनै बजेट, ऐन, कानुन कुरीरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । तत्काल गर्न सकिने धेरै कुराहरु छन् । कार्यान्वयन गर्नेहरुका लागि गएकै वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरु बनिसकेका छन् । आफैले आफुलाई सन्तोष दिने हो भने बजेट कुर्दा फरक नपर्ला
Previousसरकारलाई सुझाव दिनका लागि प्रदेश १ मा चार सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
Nextदुम्कीवासमा बस दुर्घटना : ३२ जना घाइते , ४ को अवस्था गम्भिर
प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा स्वीकृत
१० जेष्ठ २०७४, बुधबार १९:२८
बालुवाटारमा संयुक्त बैठकको निर्णय : उम्मेद्वार मनोनयन दुई दिन पछि गर्ने
११ बैशाख २०७४, सोमबार १४:२१
एक सातादेखि बन्द विराटनगर विमानस्थल खुल्यो
३ भाद्र २०७४, शनिबार १२:५८
इन्डोनेसियामा आँधी, २० को ज्यान गयो, १७ हजार घर नष्ट
१६ मंसिर २०७४, शनिबार ०९:४९